Eeg ArcGIS 10 - Geofumadas
Eeg ArcGIS 10
Abriil, 2010 ArcGIS-ESRI, Geospatial - GIS, tabo cusub, aragti ugu horeysay
Bishii Juun 2010 ayaa laga wada hadlay wadahadalka ArcGIS 10, oo aan aragno waxay noqon doontaa a muhiimad muhiim ah garashada heerka ujeedka ESRI ee dhulka juqraafi ah. Horeba shirarka iyo meelo kale ayaa lagaga hadli doonaa, waana hubaal halkan Shirka ee Julio Users, waan ogaan karnaa wax badan.
Heerka shakiga guud, waxoogaa yar oo ESRI ah ayaa caddaynaya waxyaabo aan wakhtigooda gaaban karin, iyo in ay ka faaiidaystaan ​​faa'iidooyinka isbarbardhiga ah ee isbedel weyn.
ESRI horey u xaqiijisay in aysan awoodi doonin in ay wadaagaan isla mashiinka ArcGIS 9.3 iyo sidoo kale ArcGIS 10, haddii aysan ku jirin cutub dhiska sida VM Ware VM Workstation ama Microsoft Virtual PC.
Sidoo kale qodobada waxay xusayaan in aysan sii wadi doonin sii socoshada Sahanka Sahanka, kaas oo u muuqda in uu yahay heerka 9.3, kaliya Qoraal Qaybeed oo ka mid noqon doona ArcEditor iyo ArcInfo.
Qalab la yiraahdo ArcPy, oo juqraafi ah ku sameeya Python, waa wax aad u liita. Oo waxaa la socota qalabkan, suurtagal ah in laga fogaado isku xirka xiriirka, sida hadda la dhaco .mxd iyo .lyr, kuwaas oo laga yaabo inay soo gudbiyeen faylasha, laakiin ma jiro wax xakameyn ah haddii ay dhacdo in la tirtiro ama la guuro. Taas waxaad ku hagaajin kartaa isku-xirnaanta jaban oo aad ka heli kartid warbixinno ku saabsan lakabyada ku xusan mxd iyo sifooyinka u-dejinta.
Ugu wanaagsan, isticmaalka geoproceos ee asalka ah. Tani waxay noo ogolaanaysaa inaan sii shaqeyno oo na ogeysiinno marka geedi socodku dhammeeyo.
Heerka xogta meel, waxaan ku faraxsanahay inaan ogaanno in PostgreSQL la martigeliyay. Inkasta oo aanay si cad u samaynin haddii ay kor u qaadaan awoodda raadinta, inay caddeeyaan in novelty search uu yahay mid yar oo ka mid ah metadata, laakiin maaha in la hagaajiyo muujinta xogta.
ST_Geometry la dheereeya ballaarinta xayeysiiska
Informix ST_Geometry oo leh Dhexdhexaad Bixin ah
Heerka dhismaha xogta, shaqada 3D ayaa istaageysa. Halkan waxay ku balan qaadayaan in qaabeynta sifooyinka gaarka ah labada ArcGlobe iyo ArcScene labadaba la heli doono:
Ku bilaw abaabulida, joojinta, keydinta, dib udhigida iyo dib u habeynta hawlaha. Dabcan, adoo isticmaalaya qaab-dhismeedka qaab-dhismeedka CAD-yada sawir-qaadista ee abuurnimada oo kaliya ma aha mid sax ah.
Abuuritaanka sifooyin shakhsiyeed, oo ay ku jiraan kaydinta xariiqyada toosan ee geodatabase.
Awoodda ah in la keeno qaababka 3D, sida COLLADA, si toos ah u eeg aragtida 3D, oo leh nuqul, guuritaan, wareegsan, xulashooyin CAD ah.
Waxay sidoo kale bixiyaan xakamaynta nidaamyada xogta dhulalka, sida dariiqa LIDAR ee dariiqa iyo hagaajinta xogta TIN ee ArcMap.
Halkan waxaa ku yaal xiriirka muuqaalka filimka 3D. Waxay u egtahay mid aad u wanaagsan
Maxaa dheeraad ah. Si aad u fiirsato, waxaan kugula talin lahaa caawimada, inkasta oo ay rabaan in ay arkaan daqiiqado yar oo ah casriga isbeddelka, fiidiyowyada waa wax aad u macquul ah. Waa kuwan qaar xiriirinaya
Isticmaalidda. Buuggani waa mid aad uga faa'iideysanaya dhinaca ArcMap, si fudud iyo dhibic fudud.
Sidoo kale habka loo helo xarfaha dhinaca midabku waa mid aad u wanaagsan.
GIS Server. Uma muuqato wax xun, si loo sameeyo Mashups ama portals for internetka.
Socodka dayactirka. Tani waa mid aad u xiiso haddii, waayo xogta tafatirka, topologies multiuser iyo xawaalad gacanta.
Falanqaynta xogta la leh ArcGIS 10. Waxay u muuqataa in ugu wanaagsan ee ESRI ka faa'iideysan doonto waa maareynta juqraafiyada. Oo waxay bixisaa aragtida ah in kooxdu ay awood u yeelan doonto inay si fiican u qabato heerka xogta la helay. In kastoo aan wali cidna ogeyn oo ku saabsan taageerada 64.
Waxaa sidoo kale jiri doona seminaaro lacag la'aan ah, oo loo qorsheeyay 29 ee Abriil, 13 Maajo, 20 Maajo iyo 17 bisha Juun.
ESRI My aragti ugu horeysay
Post Previous«Previous GPS Mobile Mapper 6, xogta la qabsado
Post Next Khadadka 10 Maalin caadi ahNext »
10 Jawaab in "Fiiri ArcGIS 10"
AndreySkoll isagu wuxuu leeyahay:
Ku rakib ArcGis 10 laakiin ma shaqeyneyso markaan ku xiro internetka.
Sideen u xallin karaa tan?
Laga soo bilaabo ugu fiican si aad u ogaato wax badan oo ku saabsan ArcGIS 10 iyo waxyaabaha kale ee ESRI, waxaan ku talinaynaa:
Forumada ESRI, waa bulsho aad u ballaaran oo firfircoon.
Iyada oo ay ka kooban tahay wax yar laakiin waxay ku habboon tahay Isbanish, waxaa jira Forum-ka ESRI Hispanic Forum
Ka dibna blogs, rasmi ah.
Qalabka aan kuu shaqeyneynin waxay noqon karaan sababtoo ah waxay yihiin kordhin aanad iibsan oo aan si gaar ah loo bixin.
Waxaan rabaa in aan helo buugaag ama layli wax ku ool ah
halkaas oo aad ka heli karto buugag ama layli wax ku ool ah si aad uga faa'iidaysato barnaamijkan, marka lagu daro aad isku aragto iyo waliba qalabyo badan oo aan shaqayn, waxay isku dhaafeen isla ...
Waxaan isku dayayaa ArcGIS 10, ma aanan helin wali, laakiin wax badan ayaa ka soo fiicnayd shaqadeeda si ay u shaqeyso.
jos isagu wuxuu leeyahay:
iyo marka sandra iyo waxaan ku jirnaa dhamaadka Juun
E¡ isagu wuxuu leeyahay:
Wali ma aanan isticmaalin sidii ay noqon lahayd, waxay u egtahay inay wanaagsan tahay.
Ilmaha isagu wuxuu leeyahay:
Alaabtaani waa qaali.
Hello Child, iyo hadda in aad weli dhaawacan.
Weli waan dhaawacanahay dareenkeyga.